China High Quality Magetsi Yakagadziriswa Substation Mudziyo Substation Wholesale-shengte vagadziri uye vanotengesa | Shengte
Yepamusoro Yemhando Yemagetsi Magetsi Yakagadziriswa Substation Mudziyo Substation Wholesale-shengte
Pre-yakaiswa chinomiririra (inozivikanwawo seEuropean bhokisi shanduko), inowirirana ne GB / T17467-1998 uye IEC1330 zviyero, inoshanduka uye nyore kumisikidza, kushomeka kurasikirwa, ruzha rudiki, pfupi dunhu uye kuwandisa kuramba.
Inokodzera nzvimbo dzekutengesa, matunhu ekugara, maindasitiri uye emabhizinesi emakambani, zvipatara, zvikoro, nhandare, zviteshi, zviteshi, subway nedzimwe nzvimbo. YBM uye YBP marudzi maviri ehurongwa.
Chimiro cheststation i "ziso" kana "chigadzirwa" dhizaini
Iko shell yezvigadzirwa ndeyealuminium alloy ndiro, simbi isina simbi, ndiro yemubatanidzwa, girazi faibha rakasimbiswa samende ndiro, nezvimwe.
Iyo yekumisikidza base inogadzirwa kwakakurudzira chiteshi simbi kana simenti ine yakasimba ngura kuramba uye yakakwana michini simba.
Iyo yepamusoro chifukidziro chebhokisi muviri inotora yakapetwa-marara mamiriro, ayo ane akanaka kupisa kuputira, radiation radiation uye kufefetera maitiro.
Ruvara rwebhokisi runochinjika uye runogona kuverengerwa nenharaunda yakatenderedza.
Prefabricated substation (inozivikanwawo seEuropean bhokisi shanduko), zvinoenderana neGG / T17467-1998 yakajairwa uye IEC1330 standard, inoshanduka kumisikidza, yakaderera kurasikirwa, yakaderera ruzha, yakasimba kurwisa kune pfupi dunhu uye kuwandisa. Inoshanda kunzvimbo dzekutengesa, dzimba dzekugara, emabhizimusi uye emigodhi mabhizinesi, zvipatara, zvikoro, nhandare, zviteshi, zviteshi, nzira dzepasi pevhu uye dzimwe nzvimbo. Pane marongero maviri: izwi font (YBM) uye mhando font (YBP).
Kureba: ≤ 1000m;
Kumhanyisa kwemhepo: ≤ 34m / S (isingadarike 700pa);
· Ambient tembiricha: kunonyanyisa tembiricha + 40 ℃, hushoma tembiricha -35 ℃;
Humidity hwehukama: avhareji yezuva nezuva haina kupfuura 95%, uye avhareji yemwedzi wega haidarike 95%;
· Shockproof: Iko kumhanyisa kumhanyisa hakusi kudarika 0.4m / s2, Iko kutwasuka kumhanyisa hakusi kudarika 0.15mm / s2;
· Kuisa saiti kurerekera: kwete kupfuura 3 °;
Nzvimbo yekuisa: Yakaiswa munzvimbo isina moto, njodzi yekuputika, kusvibiswa kwakakomba, ngura yemakemikari uye kudengenyeka kwakanyanya.
· Kana iwe ukapfuura izvo zviri pamusoro mamiriro, unogona kutaurirana nekambani.
· Diki saizi, compact dhizaini uye nyore kuisa.
A. Iyo yekumisikidza chimiro yakarongedzwa muchimiro che "mesh" kana "chigadzirwa".
B. Chigadzirwa chehombodo chigadzirwa chakagadzirwa nealuminium alloy ndiro, isina simbi ndiro, yakasanganiswa ndiro, girazi faibha yakasimbisa samende bhodhi, nezvimwe zvakadaro.
C. Hwaro hwechigadziko chakagadzirwa nesimbi yakakosheswa simbi kana samende, ine yakasimba kuramba ngura uye yakakwana michina simba.
D. Chivharo chepamusoro chekabhineti chinotora chimiro chekaviri, icho chine kupisa kwakanaka kwekudziya, mwaranzi nemhedzisiro yemhepo.
E. Kamuri yega yega yechinongedzo yakaparadzaniswa kubva kune yakazvimirira mukamuri nesitiroko. Imba yega yega ine zvigadziriso zvemwenje. Musoro weiyo transformer unogadzirirwa ne otomatiki mweya yekudzimisa mudziyo kugadzirisa tembiricha yeiyo transformer kamuri.
F. Bhokisi rinochinjika muvara uye rinogona kuratidzwa pamwe nenzvimbo dzakatenderedza.
Zita Kambani Yakakwirira kumanikidza divi Shanduko Kumanikidza kudivi LV
Rated chinzvimbo KVA 10 30-2500 0.4
Rated voltage KV 400 \_ 630 50-2500
Rated ikozvino KA 12.2 (2s kana 4s） 16 （2s kana 4s） 20 （2s kana 4s） 15 (1s), 30 (1s), 50 (1s), 65 (1s)
Simba Frequency Kushivirira Izvozvi KV 75/85
Mheni Kufuridzira Voltage Kuramba KV 75
Tinya renji KV Ip33 ± 2 * 2.5% Ip33
Chikamu chekudzivirira KA Ip23
ruzha pamwero dB < 50
Ongorora: zviyero zveprodcut uye huremu idhata kune imwe nguva yenguva uye zvinogona kuchinja nekuda kwekuvandudza dhizaini. Pashure:
Yakanyanya Mutengo Yakaderera Voltage switchgear GCS Yakadzika Voltage Drainage switchgear Mutengesi-shengte MOQ 1pcs Zvadaro:
OEM Yakasanganiswa Shanduko Yemagetsi Bhokisi Rudzi Shanduri neFekitori Mutengo-shengte
Nyora yako meseji pano uye uitumire kwatiriChigadzirwa
MapokaFor kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.